Boko Haraam oo ku dhowaad 150-qof ku diley dalka Nigeria
Home Somali News Boko Haraam oo ku dhowaad 150-qof ku diley dalka Nigeria
Maleeshiyo loo maleynayo in ay ka tirsan yihin Ururka xagjirka ah ee Boko Haraam ayaa lagu soo waramaya in ku dhowaad 150-qof ku dileen weeraro ka dhacay dalka Nigeria.
Weeraro todobaadkan ka dhacay Waqooyi-Bari ee dalkaas ayaa dad rayid ah oo badan ay ku nafwaayeen.
Weerarkii u horeeyay ayaa ka dhacay meel ku dhow webiga ku yaalla xadka Nigeria iyo Chad galabnimadii arbacada, waxaana ku dhintey 97-qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur.
Talaadadii, maleeshiyo mintidiin ah ayaa toogasho ku diley 48-qof oo wada rag ah kadib markii ay kasoo baxeen salaad ay soo tukadeen. Waxaa la sheegay in ay sii daayeen haween iyagana masaajidka kasoo baxay.
Weeraradan ayaa imaanaya xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo kooxda Boko Haraam ay inta badan ku doodo in ay dalka Nigeria ka hirgeliyaan shareecada Islaamka, waxaana weeraradan u dambeeyay dadka la diley u badan yihin muslimiin.
Somaliland: Faysal Cali Waraabe Oo Guddoomiye Cusub U Magacaabay Gobolka Saaxil.